Rio Ferdinand oo shaaca ka qaaday dhibaatada ugu weyn ee heysata kooxda Man United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Rio Ferdinand oo shaaca ka qaaday dhibaatada ugu weyn ee heysata kooxda...
Rio Ferdinand oo shaaca ka qaaday dhibaatada ugu weyn ee heysata kooxda Man United
Rio Ferdinand ayaa ku doodaya in Donny van de Beek uu yahay dhibka ugu weyn ee Manchester United madama uu yahay xidig feecan oo u baahan waqti ama in leeska iibiyo.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holland ayaa ku adkaatay waqtiga ciyaarta inuu ku soo biiro tan iyo markii Ajax uu kasoo tagay Sebtember 2020, isagoo ku soo bilowday kaliya afar kulan oo Premier League ah sannadkiisii ​​uu kooxda joogay, halka uu shan daqiiqo oo kaliya ka maqnaa kursiga keydka illaa hadda xilli ciyaareedkan.
Van de Beek ayaa lumiyay booskiisii ​​xulka Netherlands taas darteed, halka uu muujiyey xanaaqiisa kulankii Champions League ee Villarreal isbuucii hore, isagoo si caro leh u tufay xanjo markii Ole Gunnar Solskjaer uu mar kale iska indho tiray.
24 jirkaan ayaa ku dhawaa inuu ka tago United xagaagii lasoo dhaafay laakiin kooxda ayaa ugu danbeyn go’aansatay inay sii heysato Ferdinand ayaana dareensan in Van de Beek uu u baahan yahay inuu kooxda ka tago ama waqti la siiyo.
Previous articleTaliska booliska Somalia oo war kasoo saaray afduubkii lagu eedeeyey Taliye Xijaar
Next articleBorussia Dortmund oo isku diyaarisay inay laba jibaarto mushaarka Erling Braut Haaland
Tartanka UEFA Nations League 2020-21 ayaa lagu soo gabagabeyn doona Garoonka San Siro, iyadoo Spain iyo France ay ku tartamayaan koobka qaaradda. Kooxda Luis Enrique ayaa 2-1...